Inkcazo:Iiklasikti zoMkhosi weMultikopta,I-D20MM Tube zeClamp,Iiclass zeClamp zeRC Drone
Home > Imveliso > Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Ikhampasi ye-Tube > Iibhasikithi ezinkulu zeMultikopta zeengalo ezomeleleyo / i-Tube Clinic zeRC drone
Umzekelo No.: HCC-0521
Iibhasikithi ezinkulu zeMultikopta zeArm Clamp / Tube zeRC Drone
I-12mm-30mm yangaphakathi yedayimitha yangaphakathi yokuqhawuka kombhobho, ukuveliswa komatshini ococi ukubukeka okukhangayo, unyango lwendawo ephezulu.
Umgangatho ophezulu we-aluminium e-axis egcweleyo yendawo yonke yombane, usebenzisa izixhobo zokuhamba ngeenqwelomoya, ubunzima bokukhanya okuphezulu, ukubekwa komphezulu
Ilungele kakhulu i-DIY. I-4,6,8-axis kunye nombhobho we-axis ogcweleyo oxhasayo oxhasayo.
Isitshixo somngxunya: M3
Ngaphandle nezibambi aluminiyam, i nenayiloni Tip Set Screw
Ukufakela i-Nylon Screw
I-Anticorrosion Nylon Screw
I-alloy iron Set Screw
I-iron Wood Deck Screw
Isimbi ye-Self Drilling Screw
Isikali seThubhu yensimbi
Ubungakanani bezinto ezazihlelelekileyo kunokuba kukuxhasa kwimveliso esekwe .stp okanye .step yefayile okanye iisampulu.
Ukuba kukho nayiphi na enomdla kwi-pls siziva unxibelelana nathi.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukuxhasa.
I-4 .Ukuthumela iimpahla
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis ngumenzi we-OEM ngokukhethekileyo kwimveliso yeCarbon fiber, inkonzo yeCarbon fiber CNC, ezinye izinto zedrone kunye neemoto. Ngokonyuka kweemfuno zeshishini lokufaka uphawu, sandise ishishini lethu ukusika iAluminium CNC, ngokuzinikela ekuboneleleni ngenkonzo ebanzi kubathengi.
Kwixesha elidlulileyo, ngakumbi nangakumbi kufanelekileyo okubonakalisa uphawu kwebhasi kusekwe intsebenziswano yexesha elide kunye nathi, kwaye sinika uninzi lolwaneliseko lwempendulo.Ngoku, sinokuqiniseka ngokuqinisekileyo ngomgangatho, sithembisa ukuba isampulu kunye naluphi na uhlolo lomgangatho lwamkelekile.
Iikhathalo zomkhiqizo : Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Ikhampasi ye-Tube
I-Dia Black Aluminium Clip Clip yeRC Multirotor Qhagamshelana Ngoku
U / O bume be-aluminium ityhubhu zesampulu zidibanisa kunye neebhothi Qhagamshelana Ngoku
umbhobho we-hussd trump clamp ulungile kwi-48-51mm ububanzi Qhagamshelana Ngoku
Ivenkile enkulu ethengisa izinto eziphezulu zekhonkco kwi-25mmdiamitha Qhagamshelana Ngoku
i-aluminium enobunzima bokuhambisa ityhubhu yentsimbi Qhagamshelana Ngoku
I-25mm ye-aluminium ityhubhu yokutshixa ibhobho Qhagamshelana Ngoku
aluminium yokutshixa ityhubhu clamp u ubume 25mm Qhagamshelana Ngoku
I-D12 / 25MM Multi-rotor Arm Clamp / iClamps zeC Tube Qhagamshelana Ngoku
Iiklasikti zoMkhosi weMultikopta I-D20MM Tube zeClamp Iiclass zeClamp zeRC Drone Iplastiki zeewashs zeplastiki Izitshisi zoMatshini weTitanium Ikhabhoni yeCarbon Tube yeMultikopta Isikali seBhokisi yeAluminiyam Iileta zokuma kweAluminiyam
Iiklasikti zoMkhosi weMultikopta I-D20MM Tube zeClamp Iiclass zeClamp zeRC Drone Iplastiki zeewashs zeplastiki Izitshisi zoMatshini weTitanium